သြစတျေးလျက မြန်မာပိုင်စိုက်ခင်းလေး (ဓာတ်ပုံ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သြစတျေးလျက မြန်မာပိုင်စိုက်ခင်းလေး (ဓာတ်ပုံ)
သြစတျေးလျက မြန်မာပိုင်စိုက်ခင်းလေး (ဓာတ်ပုံ)
Posted by phone_kyaw on Aug 27, 2012 in Copy/Paste | 16 comments
Australia က မိုင်းလုပ်သားတစ်ယောက်ရဲ့မိသားစု ဘ၀ တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ပေးပါ။ ဘယ်လိုနေထိုင်ရလဲဆိုတာကို မသိသေးတဲ့သူတွေ သိအောင်လို့ ဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ဖြစ်တယ်။ ကြွားတာမဟုတ်ပါဘူး။
ပြည်တွင်းထဲမှာ ရှိတဲ့မိုင်းလုပ်သားတွေနဲ့ သြစတျေးလျက မိုင်းလုပ်သားတွေရဲ့ ဘ၀ဟာ ဘာ့ကြောင့်များအကွာကြီးကွာလဲမသိပါဘူး။
နေဖို့ အိမ်ကို အခမဲ့အလုပ်ကပေးတယ်။ ရေမီးအခမဲ့။ လေးခန်းပါတဲ့အိမ်။ ခလေးတွေအတွက် ကျောင်းစရိတ်လည်း မပေးရပါဘူး။ ကိုယ့်ခြံထဲမှာတော့ စိုက်ခင်းလေးတစ်ခုတော့ ရှိရတယ်။ ကန်ဇွန်းကစလို့ငှက်ပျော်ပင်အထိစိုက်ထားရတယ်။ ၀ယ်စားလို့ မှ မရတာဆိုတော့ဗျာ။
ဒီနေ့ မနက်ပဲ ပျင်းနေလို့ အပျင်းပြေ ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီး ခင်ဗျားတို့ အားလုံးကြည့်ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဘုန်းကျော်( သြစတျေးလျ )
..ပထမဆုံး လက်မ ထောင် အားပေး သွားပါတယ် ခင်ဗျာ….
သူ့အိမ်သူ ပြန်ရိုက်ပြတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားဟင် …. ။ အောက်ဆုံးကပုံကိုမြင်ဖူးတယ်လေ .. ဒါကြောင့်မေးတာ … :cool:
ဒါနဲ့ ကိုဘုန်းကျော်ရေ ……. တော့်ဓါတ်ပုံတွေက … တပုံချင်းစီတင်လျှင် ပိုကြည့်လို့ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော် …. ရှင်က ပုံတွေ အားလုံး တင်ပြီးမှ အင်းဆက်ဂလက်ရီလုပ်လိုက်လို့ အခုလို ပုံတွေ သေးသွားတာပါပဲ … ။ ငှက်ပျောပင်လား ဘာလား .. အဲ့ပုံက ဇောက်ထိုးကြီး .. ပြချင်လျှင် ပုံကို rotateလုပ်ပြီးမှ ပြပါ … အဲ့ပုံကို လိုက်ကြည့်ရတာ … ဇက်တောင်စောင်းသွားပြီ
ကလေးတွေ အိပ်တဲ့ အိပ်ယာကတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပဲ .. လူကြီး အိပ်ယာကျမှ … ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဗြုတ်စ ဗျင်းထောင်း ဖြစ်နေရသတုံး …. အရုပ်လေးလည်း တွေ့တော့ …. ကလေးပိစိလေး ရှိတဲ့ အိမ်များလား ။
ပြောချင်တာ ပြောပြီး ပြေးပြီအေ …. ။
p.s // စိတ်ရူးပေါက်လျှင် … ဘလိုင်းဂျီး ထမဆဲနဲ့နော် …. လူတိုင်းမှာ ပါးစပ်ပါဧ။် .. ခွိခွိ
ကိုယ်တိုင်စိုက်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်း ဈေးဖိုးလည်းချွေတာ ရာရောက်ပြီး လတ်လတ်
ဆတ်ဆတ်လည်း စားရတော့ အများကြီးအကျိုးကျေးဇူးများတာပါပဲလား ကိုဘုန်းကျော်ရေ။
မြင်မိတာလေး ပြောရရင် သြဇီက ရေမြေကောင်းလား။
အိမ်ရှင်မကိုများ တဖက်လှည့်နဲ့ အပြစ်တင်ထားတာလား။
အိမ်ခန်းနဲ့ နောက်ဖေးခန်းတွေမှာ အ၀တ်တွေက ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသလားလို့။
ကိုယ့်နိုင်ငံသားတစ်ယောက် အခြားနိုင်ငံမှာ အောင်မြင်ကြီးပွားနေတာ ကြွားတယ်လို့ မပြောလိုပါဘူး။
အိမ်ကတော့ မိုက်သားဗျ ..
အပြင်းပျေ ရိုက်ပြလို့ အပြင်းပျေ ကြည့်သွားပါတယ် ..
ဒီပုံတွေထဲမှာ ဟိုတစ်ခါ ကြွားတုန်းက စားပွဲဂျီးကိုလည်း
မြင်မိပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ..
မMaMa မြင်တဲ့အတိုင်း မြင်မိတာပါပဲ။ တစ်ခါခူးချက် တစ်ယောက်စာတောင် ၀ပါ့မလားနော်။ နံနံပင်၊ပူစီနံ၊
ပျဉ်းတော်သိမ်၊စပါးလင် ဟင်းခတ်ရွက် စုံစုံလင်လင်တော့ တွေ့တယ်။ အဲဒီမှာ အတော်သုံးဝင်မယ်။
အောက်ဆုံးက ပုံကတော့ အရင်ပြောခဲ့ကတည်းက မယုံပါဘူး။ သူ့အိမ်မှာပဲနေမှာ။ ကြွားနေတာပဲနေမှာလို့။
ကျန်တာမမှတ်မိရင်တောင် စာအုပ်စင်အောက်ဆုံးက ကြမ်းပြင်မှာကပ်နေတဲ့ အိမ်ကအဘိဓာန်နဲ့တစ်ထေရာ
ထဲတူတဲ့ သာလွန် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်စာအုပ်ကြီးကိုတော့ ပုံသေးသွားလည်း မှတ်မိနေပါကြောင်း..း)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလည်း. အိမ်ခြံဝင်းမှာ.. စားပင်သစ်ပင်တွေစိုက်ခိုင်းခဲ့တယ်..
နိုင်ငံရပ်ခြားနေတဲ့.. ကိုရင်ဘုန်းကျော်ကမှ. ဗိုလ်ချုပ်စကားနားထောင်သေး..
သွင်းကုန်စာရင်းမှာ.. အမြဲထိုးတက်နေတဲ့.. ဂရပ်ဖ်ကြီးသတိရလို့…
-ဗိုလ်ချုပ်စကား နားထောင်ပါတယ်။ မြို့ပြင်ကအိမ်မှာ၊ခြံမှာ နှစ်ရှည်သရက်ပင်နဲ့အခြားအပင်တွေ စိုက်ထားတာ နှစ်တိုင်းအမျိုးတွေရော၊အိမ်နားနီးချင်းတွေပါ ဝေရတယ်။ ခြံမှာဆိုလည်း အိမ်စောင့်က
ဈေးဖိုးကာမိအောင်ဆိုပြီး ဟင်းရွက်တွေ စိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် မြေက ပုံတွေကအတိုင်း အနီလိုလို၊ရွှံလိုလို
ဆိုတော့ သဘာဝမြေသြဇာ ထည့်တာတောင် ဟင်းရွက်ကျတော့ ကိုဘုန်းကျော် အပင်တွေအတိုင်း သိပ်မဖြစ်ဘူး။ တစ်ခါစားပဲ ရတယ်။ ဒီမြို့ထဲကျတော့ စိုက်ဖို့နေရာမှ မရှိတာ။ အလှပင်ပဲ ရတယ်။
– ကိုkai ရော အဲမှာစိုက်လို့လား။ နှင်းနှင်းတို့တုန်းကတော့ အိမ်ထဲ ဟင်းခတ်ပင်တွေ ပန်းအိုးနဲ့စိုက်တာ
ကလွဲလို့ဘာမှမစိုက်၊၀ယ်စားခဲ့တာချည်းပဲ။ မုန့်ဟင်းခါးချက်ဖို့ ငှက်ပျောအူဆိုရင်တောင် အဲက မြန်မာ
တွေယူလာပေးရင်တော့ ချက်လိုက်တာပဲ။ ရာသီဥတု အရမ်းအေးနေရင်တော့ ငှက်ပျောပင်တွေ သေကုန်
လို့ ငှက်ပျောအူမပါတဲ့(ငှက်ပျောအူအစား ထည့်ချက်ဖို့ ပိန်းရိုးလည်းမရှိဆိုတော့)မုန့်ဟင်းခါးငုတ်တုတ်ပဲ စားရတယ်။ ပဲပြုတ်ငတ်တယ်ဆိုရင် ပဲဝယ်ပြီးတော့ ပြုတ်စားရတာပဲ။ ဒူးရင်းသီးစားချင်ရင် ထိုင်းက Frozen ခဲထားတာကြီးကိုပဲ ဈေးကြီးပေး ၀ယ်စားရတယ်(အခုတော့မသိ)။
– (စား)ဆီ လည်း မြန်မာတိုင်း အများကြီး မစားကြတော့ပါဘူး။
– စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ၊ အစီအစဉ်တွေကြောင့် ဆီလျှော့စားနေတဲ့ မြန်မာတွေ အများကြီး ရှိနေပါပြီ။
ကိုဘုန်းကျော်နေတဲ့နေရာလည်း လိုက်သွားလို့ရပေမယ့်(ဖေဖေ့နောက်ကိုပြောတာ) လိုက်ချင်တဲ့စိတ်
မရှိလို့ မရောက်ဖူးခဲ့တာ။ အဲဒီလိုနေရာတွေမှာ မပျော်တာက ဒီကမြန်မာပြည်၊မြန်မာလူမျုိး၊မြန်မာအမျိုး
တွေနဲ့ဝေးနေရတဲ့ အထီးကျန်မှုကြီးကို မခံစားနိုင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပေါ့။ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တယ်။
– ဘယ်အရာမဆို ‘သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန် တန်ရုံ’ ရှိမှာပေါ့။ ဟိုက မိုင်းလုပ်သားရဲ့ ခံစားခွင့်က ဒီကနဲ့ယှဉ်ရင်
တော့ ‘ရွှေ’ ပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူ့ရေမြေ၊သူ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းနဲ့ကျတော့ သူ့ရဲ့ခံစားခွင့်က ပုံမှန်ပဲ
– ဒါကြောင့် ကိုkai သွားဖြဲပြနေလည်း (မြန်မာပြည်ထဲကသူတွေအများစုနဲ့စာရင်)၊ (ဟေ့…မြန်မာတွေ)
ဆိုတဲ့ စကားစုများက နှိမ့်ချသလို ခံစားရတာမို့ မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်နဲ့ ပြန်ချေပလိုက်ပါတယ်။
ဘာဗြ အမေကြီးကားမှာ အဆိုးရက ကျုပ်တို့တွေကို အပင်ဆိုက်ဖို့ ၅လက်မ့န်းအိုးလေးတွေပေးတယ်ဗြ ..
ကိုဘုန်းကျော်ရေ…ခင်ဗျားတို့အတွက် ၀မ်းသာစရာပဲဗျို့…Black list မှ မြန်မာနိုင်ငံသား (၂၀၈၂)ကိုပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပီလို့ကြားတယ်။
ကျုပ်တို့ တေားဓလေ့ အရ အိမ်နောက်ဖေး ဈေးဆိုင်တည် ဆိုတဲ့အတိုင်း
အပင်လေးတွေ စိုက်ရတာကို သဘောတွေ့လှ၏
အပင်လေးတွေကို နှစ်သက်လွန်းလို့ ကူးယူထားလိုက်တယ်နော်………
တဂျီးက ဇကာတင် ၂၉ ပုဒ်မှာ အရွေးခံရတဲ့လူတွေကို အော်ဇီစ၇ိတ်ငြိမ်းပို့ပေးမယ်ဆိုရင်အကောင်းသား